Izindondo Zemidlalo Yomjaho WeMarathon Esebenza Ngokwezifiso
Ngemuva: kuqhume isihlabathi
Ubuciko: ukusakaza ngokufa, akukho koqweqwe lwawo
Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile ngokwezifiso:
Kwesinye isikhathi okubizwa ngokuthi izikhonkwane ze-epola, izikhonkwane zokulingisa i-cloisonné noma izikhonkwane ezifayo ezifakwe ngoqweqwe oluqinile, luhlobo lomsebenzi wobuciko wamabheji ephini. Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile zibushelelezi kuthinte futhi zigcwaliswa ngombala kusetshenziswa imibala ye-PMS futhi zibhakwe kuze kuphulukiswe koqweqwe lwawo. Izindawo zensimbi eziphakanyisiwe nemibala isezingeni elifanayo bese ipholishwa ngesandla ibushelelezi bese ifakwa ngegolide, isiliva noma ithusi.
Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile zinokubukeka okuhlala isikhathi eside nokuhlala isikhathi eside. Banenani eliphakeme kakhulu elibonakalayo ngenxa yemibala yabo egqamile, okuyizinketho ezinhle kakhulu zezikhonkwane zomcimbi, izikhonkwane zomhlangano, izikhonkwane zobuzalwane, izikhonkwane zobudlova, izikhonkwane zezepolitiki nezikhonkwane zebhizinisi.
Ngolwazi lwethu olusebenzayo lokusebenza nezixazululo ezicatshangelwe kahle, manje sesithathwa njengomhlinzeki onokwethenjelwa wabathengi abaningi abangavela emazweni angaphandle be-OEM eyenziwe ngokwezifiso i-China eyenziwe ngokwezifiso i-Metal 3D Medallion Coin Ust Soft Enamel Souvenir Challenge Coin (189), Ebambelela kufilosofi yebhizinisi 'yamakhasimende kuqala, qhubekela phambili', samukela ngobuqotho abathengi abavela ekhaya lakho nakwamanye amazwe ukuthi babambisane nathi.
Inani elenziwe ngokwezifiso le-OEM Challenge Coin Presentation Case and Challenge Coin Plastic, elinekhwalithi enhle, inani elifanele kanye nensizakalo eqotho, sijabulela idumela elihle. Impahla ithunyelwa eNingizimu Melika, e-Australia, eningizimu-mpumalanga ye-Asia njalonjalo. Wemukele ngemfudumalo amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ukubambisana nathi ngekusasa eliqhakazile.
Langaphambilini Umdanso Wokuthweswa Iziqu Kwezingane
Olandelayo: Izikhiye zensimbi ezi-Cute Animal Hard Hard Custom
5k Ukugijima Izindondo
Kuboniswa Izindondo Zokuqalisa
Izindondo Zethusi Legolide